Mino, dieny mbola tsy tara loatra
"Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany, dia hisy fitsarana." Hebreo 9:27
"Efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana ; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona ianao." Deoteronomia 30:19
Taona vitsivitsy lasa izay, tany amina tanàn-dehibe iray any Guinée Équatoriale, dia nisy lalàna nandidy fa ny trano rehetra manamorona ny arabe lehibe dia tsy maintsy atao vatosokay (béton) ary misy rihana roa farafahakeliny. Nampitandremana ny tompon’ny trano tsy nanaraka izany fenitra izany intsony, ary nomarihina X lehibe miloko mena ny tranony. Nisy nanamboamboatra ny tranony sy namboly voninkazo teo anoloana; ny hafa tsy nanao na inona na inona… Nandeha ny fotoana, ary maro ny nihevitra fa tsy hisy izany fandravana izany.
Indray andro anefa, tsy nisy fampilazana, fa araka ny baikon’ny fitondram-panjakana, dia nisy fiara vy mpitrongy, tonga nandrava ireo trano voamarika X, na dia ireo nohatsaraina sy noravahana voninkazo aza.
Andeha hampitaha izany amin’izay lazain’ny Baiboly momba ny olona: “Samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra” (Romana 3:23). Mitatao amin’izay rehetra tsy vita fihavanana amin’Andriamanitra ny fanamelohana. Maro ny mihevitra fa ho afaka mampiseho fiainana tsaratsara kokoa, raha maneho hatsaram-panahy, mankany am-piangonana, manao vavaka sy asa fanasoavana. Ny sasany kosa tsy miraharaha ilay fampitandremana, na tsy mino hoe mety hihatra ny didim-pitsarana. Iza tokoa moa no hanameloka olona tso-po e?
Kanefa manana izay takiany Andriamanitra. Satria nanota isika rehetra, dia tokony ho lavitra Azy mandrakizay. Andriamanitra anefa naniraka an’i Jesosy Kristy Zanany, mba hitondra ny famaizana ireo fahotantsika sy hanome fiainam-baovao ho an’ireo mino Azy. Androany ianao, miaraka aminy, dia mbola afaka manorina indray ny fiainanao ho vaovao!